Iyada oo ku xidhan nooca kulan multiplayer android dan kuu jiraan wax qof kasta, laga bilaabo kulan in uu socon doono dhererka aad ka dhimo, si ay kulan in aad ku mashquulsan doonaa si ka badan sidaas, inay aad iska gebi qaadi doonaa dunida kale.
Liiska kulan multiplayer android waxaa si joogto ah la cusbooneysiiyaa, oo wuxuu ka kooban yahay kulan yihiin in lagu bixiyo oo lacag la'aan ah. Sida GTA meesha aad halka karo waqtiga aad hoos loogu daadago dadka lugaynaya, dambiilayaasha toogtay iyo dilka dadka lacag.
Sidaas halkan waa in caawa lagu soo dejiyey oo ah 50 kooxood ee ugu sareysa oo lacag la'aan ah, iyo lacag bixisid si aad u ciyaaro kulan multiplayer android, si aad u eegno.
Tani waa ciyaarta tartanka Arcade ugu fiican. Taxanaha kulan gaari tartanka ayaa wuxuu gaaray heer cusub. Stunts waa u daran iyo waxqabadka firfircoon yahay xawaare sare. Waayo-aragnimo Tani baabuur-wadidda ayaa engine cusub kaas oo ku shaqeeya by heerka cusub ee physics.
2. Aan Hit miisaskii
Price: $0.58 - $ 150.00
Haddii aad u jecel turub ka dibna aad u jeclaan doonaa kulankaan. Tani turub ciyaarta live waxaa ciyaaray kulankii ciyaartoyda live dhabta ah adduunka oo dhan. Iska diiwaan cinwaanka email ama xisaabta Facebook, iyo in ka badan 25.000.000 ciyaaryahan Android waa layaabna ma leh in kulankaan waa sidaas oo caan ah.
Price: $ 1.32 - $16.51
Kulan multiplayer Tani waa ciyaar online waqtiga dhabta ah. Game Tani waa ciyaar waqtiga dhabta ah, halkaas oo aad la ciyaaro wax ilaa afar ciyaaryahan, oo dhan oo isku mar ah. Waxaad dooran kartaa in la ciyaaro saaxiibadaa ama naftaada kulanka shisheeyayaal dhameystiran oo ay ka soo adduunka oo dhan in this ku wada wareegsan oo xiiso leh socda ciyaarta.
Tani waa ciyaar macquul balliga ama snooker. Waxaa loo arko mid ka mid ah kulamada ugu macquul ah inuu ciyaaro ku hadalka taleefanka gacanta. Play pool iyo snooker sanamyada 3D buuxa, oo leh jawi in ay yihiin adag iyo textured. Haddii aad rabto in aad kulanka ka dibna xirmo dhameystiran kulankaan idiin aan loo eegin in aad tahay ciyaaryahan ama aan halis ah.
Kulankaan waa waayo-aragnimo ugu wanaagsan ee dagaalka waxaad ka heli doontaa. Naqshadeynta waa kala go'in daanka, isagoo xirfadiisa ciyaareed ah feerka waa magaca ee ciyaarta. Waxaad ku guuleysan karaa abaalmarino dhab ah oo gacanta ku waa mid aad u dareen leh.
6. La dagaalanka Modern 4: Zero Saacadda
Price: $ 1.49 - $79.99
Kulankaan ayaa la soo celiyey u casriga ah. Kulankaan waa tallaabo ka buuxaan oo uu leeyahay cutubka cusub ciyaartoyda ciyaarta, si ay isugu dayaan in ay gacanta at. Iska ilaali in burbur oo heer caalami ah la haystaa sacab muggiis oo askari oo loo tababaray aqoonyahanada. Waa in aad raad madaxda dunida oo waxaan iyaga ku badbaadin ka koox argagixiso ah.
7. godxabsiga Hunter 4
Waxaad la dagaalamaan oo jinniyo qaba boqortooyadaada iyo heyso awoodaha kala duwan ee jidka. Waxaa jira 4 characters oo aad dagaal la samayn karaa. Waxaa jira jinniyada in aad u baahan tahay inuu la diriro, in hab multiplayer waa dhehay; sidoo kale waxaa jira hab dhimashada ciyaarta iyo weliba ah. Waxaad baran doontaa in ay casriyayso aad xoog iyo xirfadaha, oo ay dagaalo badan oo lagu casriyeeyo hub aad sidoo kale waa la heli karaa.
Kulankaan bixisaa ciyaaryahan waayo aragnimo dhab ah baabuur la qaar ka mid ah baabuurta ugu qiimaha badan. Sodcaalku waa sida runta ah nolosha sida ciyaar ka heli kartaa. Heerka wadida waa loo arag oo xiiso leh waa in aad ka ciyaaro multiplayer ama hab ciyaaryahanka kaliya.
Tallaabadan waxaa ka buuxaan oo kulan degdeg ah socod, waa kaalinta labaad aan dhammaadka lahayn. Tony Stark hadda waa nabad, laakiin weli uu ka fool hanjabaad oo dunida ku baahsan, iyo Iron Man waa kan keliya oo qaadi karto daryeelka iyaga oo dunida ka mid ah.
Kulankaan ayaa kuu ogolaanaya in aad jinsiyadda qof waqti kasta iyo baabuur kasta. Kulan A wadida cajiib ah oo kuu ogolaanaya in aad si ku gubi doonaan waddada. Kulankaan ayaa waxa uu leeyahay Roobka 22 baabuur, kaas oo si joogto ah u koraya. Baabuurta waa faahfaahsan oo ay jiraan in ka badan 100 oo ka mid ah in aad baabuur waddo. Waxaa jira leaderboards, caqabadaha aan jirin, tijaabooyin waqti iyo markii wareejiyay technology multiplayer taas oo cusub. Tani waxay u ogolaaneysaa in aad tartan mar kasta, meel kasta iyo qof kasta.
Kulankaan wadida gaar ah oo aad ka heli doonaa dhibcood laakiin waa in aad si fiican u la wado si aan u helno. Waa in aadan jinsi iyo aad waa in aadan baabuur kaxayn, sida haddii aad ee GTA. Kulankaan waa dhan oo ku saabsan si sax ah iyo si habboon u-wadidda. Ujeedada ugu weyn ee ciyaarta waa ay u garaacaan ciyaarta. Waxaa jira leaderboards iyo guulaha aad u crack.
12. Racers Vs gaysteen
Price: $0.66 - $ 5.76
Waxaad noqon kartaa dhaawac COP abuuro si racers ama waxaad noqon kartaa bad goosh ah. Ma aha oo kaliya in aad fursad u hesho in ay ku daba joogaan goosh ah, laakiin waxa kale oo aad fursad u helaan in ay bad goosh ah, in this ciyaarta tartanka xawaare sare. Haddii aad ku dhacay bad goosh ah ka dibna waxaad ka heli doontaa dhibcood sare iyo sidoo kale haddii aad iyaga ku eryan. Hab multiplayer ayaa awood u aad jinsi la darawalada kale si ay u arkaan oo darawal jid fiican waa.
Race 13. Ninja Chicken
Price: $ 0.59 - 23.00 $
Tijaabi in Ninja Chicken waa orodyahanka ugu dhaqsiyaha badan, by naftaada-daradii kulankii racers kale kulanka madal tani waa cute iyo madadaalo. Raadi naftaada ku taal dalka reer dinosaurs ah, iyo daawato baxay ee påskkäringar duulaya ku saabsan.
14. waaridda Warriors2
Kulankaan ayaa waxaa lagu ciyaaray ee North of Udar, halkaas oo aad buu u diriri doonaa jinniyada oo lagu gelinaya awoodaha oo dhan ay wada gudahood koox ka mid ah oo xoogeeyey munaarado. Dal ayaa burburay ka dib dagaalkii ugu horeeyay oo ay haatan ku hanjabay in ay isku dayaan oo mar kale sameeyo wax la mid ah. Sida Warriors cadni ee aad u baahan tahay inuu la diriro jinniyadu iyo dagaalka joojiyaan mar kale ka dhacayaan.
15. Jahannamo Dabka: yeedhidda
Price: $ 0.89 - 99.99 $
Iriddii u dhexaysay Xukunka jinniyada oo leh annaga ayaa quful, iyo ujeedooyinkooda inuu keeno xaalad jahawareer si ay u dhiibaynaa beerahayaga iyo nabad. Waxaad tahay ugaadhsiga iridda ah iyo duleella u waji leh u baahan in la wada baabbi'iyey, si aad u leeyihiin in ay joojiyaan ciidamada jahannamada dabka ah ka hor inta ay goori goor tahay. Hadda waxa uu idiin soo dejiyey waa in ay isku dayaan oo ay albaabbadii Haadees.
Waxaa jira crack ah ee dhulka udubyadiisa iyo hadda xayawaanka u baahan tahay si aad u hesho meel ay ku ammaan. Sidaas ikhtiyaarka kaliya ee waa in la dhiso tuulada cusub oo dhan saaxiibadood. Diego, Sid, Manny iyo Ellie waajahaan caqabad kasta sida ay la kulmaan wax kadis ah oo xiiso leh jidka.
Kulan istaraatijiyad xaqiiqada Taasi ma dhici doono shaashadda, waxa ka dhacaya adduunka dhabta ah. Waxaa jira dalka durkiya dunida oo dhan waa in aad qaadato ama u difaaco in kulankaan, oo hadda aad u leedahay in la sameeyo oo dhan waxaa go'aan ka gaarno haddii aad rabto in aad qayb ka mid ah caabiga ama qayb ka mid ah loo iftiimiyey noqon.
18. Kulanka qabaa'ilka
Kulankaan waa dhan oo ku saabsan istaraatiijiyada, dhisto tuulo, Ciidankaaga soo sara kicin, ka dibna ku qaataan dadka kaa soo horjeeda. Kulanka of Qabiiladu waa ciyaar multiplayer meesha aad weeraraan cadaawayaashaada aad iyo aad ay weeraraan, iyo badan oo hub ka soo xusho aad Weligeedna ma noqon doonto gaaban siyaabaha ay u burburiyaan mucaaradka. Jooji tuugo iyo dagaal malaayiin ciyaartoyda kale.
Kulankaan ayaa waxaa ka mid ah hababka hal abuur leh iyo badbaadada, la godadka, iyo tuulooyinka, iyo Caalamka koobi karayn in la ogaado. Baadh oo dunida sidii aad la abuuro oo la farsameeyaan blocks dhismaha. Haddii aad waqti iyo batari aad ku raaxaysan karaan ciyaaro Minecraft halka ku dhaqaaqo.
20. Modern dagaalanka 5: mugdigu
Kulankaan Shooter FPS waxaa ka buuxa talaabo sida qaybta ugu dambeeyay qaadataa kulan toogashada heerka ku xiga. Ku martiqaad saaxiibada ama abuuro koox oo tijaabi midkood shaqsi ama koox xirfado ciyaartoyda kale. Kulankaan dagaal firfircoon kugu dhawri doonaa marti qaaday halkaas oo Quusan khiyaar ah ma aha.
21. NBA macaanka
Play aad Xiddigaha kubada kolayga NBA jecel oo dhan sida aad wada dhexgelinnin in this ciyaarta basketball duuleysa sare. Haddii aad qabto kooxda ay jecel yihiin ama xiddiga markaas halkan waa fursad aad u ciyaaro dhinac iyaga la, iyo 30 kooxood oo NBA ka soo xusho ciyaaro kubada kolayga ayaa kaliya heshay ka xiiso badan yahay.
22. Order & fowdo Online
Kumanaan ka mid ah ciyaartoyda ku raaxeeysanayaan this waayo-aragnimo cusub, waxay la saaxiibadood kaashanayaa in ay ka qayb qaataan balaadhan, halka sahaminta duni tan waqti isku mid ah. Qaado Guild on tuurnimo sida aad ku gaari guulahaas in kaliya geesi gaari karo, iyo naftaada saaray Leaderboard ah.
23. ingriiska HD
Tani Ciyaar fantastik waa isku dhafan ee badbaadada, physics iyo cunista ciyaartoyda kale. Si ay u noolaadaan waa in aad u koraan oo ay aadeen noolaha kale ee yaryar. Laakiin waxaa jira bahal kale oo ka weyn in ay doonayaan inay sida fiican ee aad u cunaan. Naqshadeynta waa mid cajiib ah oo soundtrack wuu dhawri doonaa si aad u xasiloon yahay dhawaaqa ay daarmayaay'e. Oo sidaas waa inaad diyaar u ah inay umuuruhu? Waxaad u leeyihiin in ay koraan oo ay aadeen Faleen oo yar yar.
24. Pool Break Pro: 3D bilyaar
Kulankaan ayaa waxa uu sawiro aad u fiican kuwaas oo sax ah oo dhab ah. Waxaad dooran kartaa in aad internetka ama ka dhanka computer ka ciyaari users kale. Action waxaa si degdeg ah socod oo siman iyo naqshadeynta 3D sameeyo kulankaan marka laga reebo taagan yahay inta kale. Isku day inaad gacanta ugu snooker ama biiriyaan ama xitaa ay ciyaaraan kubad aad marna laga yaabaa in ay ku soo ciyaaray ka hor inta ay ku jiraan bilyaar ama carom iwm
Price: $ 1.49 - $69.99
Tani ciyaarta tartanka xooggan qaadataa wax walba u shaqeynaya. Ka qaybqaado jinsiyadaha meesha aad u cusboonaynta kartaa Waxaad faraskaaga ku fuushaa in rag fuula oo hydro diyaaradaha, muuqaallo kale ayaa la hagaajiyay iyo hadda naftaada waxaad heli kartaa xirfad leh hab shaqo. Waxaa jira tricks cusub iyo nidaam cusub Xayaysiin, waayo, waxaad isku dayaan in ay ka soo.
Kulanka guddiga waxaa lagu keenay kor u taariikhda, ciyaarta mar kale loo yaqaan maraakiibta dagaalka ayaa la siiyey heshiis cusub nolosha. Waxaad hadda ka ciyaari kara dadka kale oo dhan ee adduunka oo dhan, oo aad Arsenal hubka ee aad qubo aad burburin kara dadka kaa soo horjeeda. Dooro ka dumiyey, naadi iyo hub kale inay qabsadaan, badaha sare.
27. DH Texas turub - Texas Hold'em
Turub Tani waxay siday tahay inay ahaato, taas oo ah sababta ku jirta kaalinta tirada 1 sida ay waayo-aragnimo user ugu fiican. Khaarajiyeen dadka kaa soo horjeeda iyo arko haddii aad ku haysan karto turub wejiga inuu ku guuleysto Ghanna ah. Iyada oo $50.000 ee chips hore kuwaas oo lacag la'aan ah, iyo hadiyad iyo abaalgud si maalinle ah sida qof aan ku raaxaysan ciyaaraya kulankaan.
Price: $ 0.76 - $75.33
cadibo dhintay ay kiciyaan oo ay ka dhigay ciyaarta taasoo ah sida loo jecel yahay. Tani waxay qofka ciyaarta Shooter hore waa lala yaabo, sida aad ka arki kartaa oo ka naqshadeynta iyo kulan dhimashada 12 ciyaaryahan oo aad qayb ka mid ah noqon doona.
Dhis magaalo aad iyo noqdo duqa magaalada ee ciyaarta oo uu soo dib-u-moodaysay talogalay qalabyada telefoonada gacanta. Your magaalada noqon doonaa mid gaar ah adiga iyo sidii magaalo aad siyaado waxaad yeelan doontaa dad badan oo ay doonayaan inay u guuraan gudaha galay. Sidaa darteed, muwaadiniinta ka badan micnaheedu waxay yeelan doonaan baahiyaha ka badan, haatan waa shaqo aad ku sii ah magaalada ay ka taliyaan.
Price: $0.62 - $ 3.00
Kulankaan yeelan doontaa in aad ku qayliso saaxiibadaa iyo riixaya badhamada. Fluxtrunions Fasaxidda u muuqan kartaa oo aan caadi ahayn, laakiin waxay qayb ka dhan ah kulankaan yihiin. Qayliya technobabble ee saaxiibada aad ilaa markab ku qaraxday ay; raac tilmaamaha ku jira waqti xasaasi ah. Laakiin tilmaamaha ayaa sidoo kale laga soo diray si ay asxaabtiisa si isuduwidda ka hor markii ugu egyahay waa kulankaan waxa oo dhan ku saabsan, iyo dhammaan tani waa sida aad isku dayaan in ay ka soo ordo xiddiga ah qarxeen socda.
31. Words la Friends - gocasho
Price: $ 0.76 - $7.62
Waxay u sahlaysaa inaad ciyaarto kulan fiican iyo waxa ay sidoo kale kaa caawin doona inaad si aad u ogaatid erayadan, ay ka fiicnaan lahayd in aad ka ciyaaro, si aad u hesho dhibco sare. Samee erayada la isticmaalayo dusiyeen oo ku garaacday dadka kaa soo horjeeda.
Noqo geesiga iyo qabtaan dad qalato ee tallaabo. Sidii ay u baxsadaan in baabuurta in ay ku lug waxmatarayaal raacaa gaariga si degdeg ah socod, ama xataa lug ah sida ay mara jidadka. Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in qayb ka mid ah ilaalada xeebaha sida aad doonida, ama xataa duuli helicopter ah si ay u badbaadiyaan jabtay ka galayaan noqon. Waxba ma ahan wixii aad rabto in aad jiraan wax qof kasta oo ciyaarta.
Dash 33. NinJump
Tani ciyaarta tartanka multiplayer ku jira oo dhan characters aad jeceshahay oo ay qayb ka yihiin hit ciyaarta ahee Ninjump. Players Oo dunida ku baahsan ka qayb qaataan kulankaan sida ay u tartami dhan ah midba midka kale, waana wax kuu ahaan doonaa awoodaan inay u sameeyaan. Race ka dhanka ah seddex ciyaaryahan ee waqtiga dhabta ah in ay yihiin dad kala duwan ama saaxiibadaa aad ka Facebook.
34. Zynga turub - Texas Holdem
Tani kulan ee Turub waa mid macquul ah oo design waa casri ah, kulankaan ayaa qaababka cusub iyo xad iyo tartanka, ayaa loo qaaday heerka cusub ee ciyaarta. Haddii aad raadinayso waayo-aragnimo turub ah in dhabta ah waa ka dibna turub Zynga waa mid aad u.
Play chess saaxiibadaa iyo go sidoo kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan haysan saaxiibo in ciyaaro chess markaas aad ku sugan tahay nasiib, maxaa yeelay, kulankaan ayaa soo horjeeda random oo aad kala dooran karto. Samee aad account ka dibna ugu yeedhi kuwa kale u ciyaaro aad ka dhanka ah, ayaa sidoo kale Chess Time waxay soo dirayaan farriimaha riix in ay si aad war aad u dhaqaaqdo soo socda.
36. xoojinaya Hunt
Ma kula ciyaarayaan kubad ku dhexmara labo kooxood oo buluug iyo casaan. Tani kulan ee Qarinaysaan iyo dooni, waa meesha ciyaartoyda naftooda waan ismidab qarinayaa karaa siticmaalaan. Kooxda ayaa waxa ku qarinaya 20 ilbiriqsi ka dibna kooxda cas waa in iyaga heli. Markaas waa jeedo kooxda ka soo horjeeda si ay u qariyaan.
37. Dib-u-Waat 2
Tani ciyaarta tartanka RC ayaa wareega badan iyo qaabab kuwaas oo ku dhawri doontaa, aad marti qaaday. Tartanka ciyaartoyda ka soo adduunka oo dhan ilaa 4 ciyaartoy oo dhan in hab waqtiga dhabta ah. Xitaa waxaad ka heli doontaa in la wado baabuur riyo aad, iyo aad u hesho gacmahaaga ku abaal aan dhamaadka lahayn in la filanayaa doonaa ilaa aad ciyaarta.
38. Burcadda Craft City
Magaalo Baadh la burcad iyo in la abuuro xaalad jahawareer oo dhan jidadka. Waxaad ka iibsan kartaa hub, baabuurta ciyaaraha waa qabow, iyo xitaa maraan ergooyinka badbaadada. Waa u yeelato inay dagaal ku qaado magaalada iyo samayn ciyaartoyda kale mar.
39. cirib US gan
Price: $ 1.49 - $75.49
Best US ciyaarta laad aad u ciyaari doono. Play leh ama kooxaha aad jeceshahay, oo qeyb ka ah koobka noqon, ama ay doortaan in ay ku noqon karo ciyaaryahanka kaliya ee ka mid ah oo ku saabsan hal kulan. Muuqaallo kale waa u fiican, waxaana sidaas oo kale waa animations ah. Waxaa jira hab ah ciyaaryahanka kaliya, ciyaar mini waa xaddi abaal iyo dhamaadka lahayn ee howlgalada la ciyaari doono.
40. Battle Daanyeer ee
Xeerka daanyeer Kaliya ee ciyaarta. Maqal magacaaga lagu soo Mareen iyo sida rag ku soo ururin, oo gunto, waayo, dagaalka in uu noqon waxa ugu daran aad doonaa abid ee tartanka, in aad noloshaada doonaa. Haddii aad rabto in aad ogaato habka kaliya ee si aad u ogaato waa in ay la dagaallamaan ugu fiican yahay oo markaas.
Price: $ 0.63 - $4.55
Race ka dhanka ah saaxiibadaa ama dadka aadan aqoon. In this octane ciyaarta tartanka wadada sare. Kulan waa gaaban iyo aad u daran oo dhan aad ee u tartamaya kaalinta ugu sareysa, tartanka ka dhan ah afar qof ama ka yar sidii aad u furid baabuurta cusub oo ah heer xirfadeed.
42. Battle Madaxkutidu Gold
A-aragnimo Shooter multiplayer in ka dheregsan yahay hubka whacky, fasalada kuwo gaar ah oo ay jiraan 11 ka mid ah. Play ka dhanka ah ciyaaryahan kale oo caalamka oo dhan sida ciyaarta toogashada kugu haynaya daqar. Waxaa jira badan oo hub ah si loo xafido marti qaaday oo waxaa jira qaabab badan oo uu ka soo xusho kulanka sidoo kale.
Tani waa ciyaar paintball ah oo markii ugu horeysay loo abuuray in 3D. Ciyaarta ayaa waxaa ku jira qalabka isboortiga dhabta ah, multiplayer waqtiga dhabta ah iyo haddii aadan dhiig barbaro gasho, aad weydo dilay. Unlock maps cusub iyo goodies kale sida aad sida ugu dhigi ilaa kaalinta koowaad. Connect saaxiibadaa iyo qaato farxad weyn in iyaga toogtay.
44. In lala dagaallamo Modern 4: Zero Saacadda
Ka caawi fogaado burbur nuclear in this tallaabo ka buuxaan ciyaarta toogashada. Dagaal Nuclear wuxuu ku saabsan yahay in ay ka dhacaan oo keli ah koox weyn oo afar askari ah ayaa kaa caawin kara adduunka badbaadin halligaad. Koox argagixiso ah ayaa madaxda adduunka ee lagu qabtay sida la haystayaal oo kaliya adiga iyo kooxda iyaga ku badbaadin karto.
Isticmaal gaari burburiyo oo cadaawayaashiinna dalka baabbi'iyaan sidii aad ku wareegsan ilaa qoryaha iyo hubka sida badan ee aad awoodid. Iska daa dadka kaa soo horjeeda ciidda ku sida aad tegtid ilaa alaabtayda oo dhabar jab. Habee gaari oo wax laga baqo on afar giraangirood. Qabtaan stunts oo la ciyaaro ilaa afar ciyaaryahan ee this post ciyaarta apocalyptiga halligaadda.
46. ​​godxabsiga Hunter 5
Galaydh iyo xariiqda gudban waxay Kulankaan ayaa lagu wadaa in duni, halkaas oo waa inaad sii nabadda. Kora Safar ah waxaa la seeftaada gacanta, sida aad ku Safartaan shan kaarto kala duwan ka buuxsamay wuxuush. Kulankaan Waxaad ciyaari karo ciyaaryahan ahaan hal ama kiraystaan ​​saaxiibadaa si ay ugu biiraan dagaalka.
47. dhigina 3
Price: $ 0.77 - $54.86
Kooxda ilaa iyo xukumid looxyadii hoggaamiyaha sida aad ula dagaalamaan aad dhex tartamada kala duwan. Raadi dad cusub inuu u ciyaaro qol chat gudahood ama xitaa ka ciyaari saaxiibadaa. Fiiri inta aad difaaci karto matoor sida ay zaps qofka qaba Hillaaca, taas oo ah danab sare.
Hel fursad in la wado 60 baabuur kala duwan oo ka soo saarayaasha in ooze sharafta. Kulankaan waa cajiib iyo naqshadeynta waa u fiican. Hadda waxaad qaadan kartaa ilaa shan ciyaaryahan kale. Halkan waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan oo idinka mid ah waa kuwa ugu fiican ee wax gaar ah oo markaa loo arko haddii aad ku garaaci karto kasta oo kale. Waxaa jira lix kulan qaabab kala duwan oo uu ka soo xusho iyo si ka badan ka kulankaan.
A ciyaarta tartanka dagaal oo waa wax la qabatimo. Dumiya kaa soo horjeeda aad qoryaha iyo hubka sida aad u tartami iyaga ka gees ah, haddii aad u garaaceen kale oo aad weliba ka heli kartaa baabuurta. Heshid Sarre Nitro sida aad u samayn flips iyo stunts kale, oo la wado tareenka badan iyo hal.
50. Shil Drive 2: 3D Racing Game
Price: $ 1.00 - $50.50
Off ciyaarta shil wadida wadada meesha aad ka hesho in ay doortaan gaariga aad doonaysid inaad baabuur waddo. Tartamaan lix dhacdooyin kala duwan, sahamin Caalamka kala duwan furan, oo heli credits lacag la'aan ah maalin kasta aad u ciyaaro ciyaarta.
> Resource > Emulator > Top 50 Android multiplayer Games